Sir ma aha in nidaamyada hawlgalka android iyo macruufka leeyihiin share libaaxa marka ay timaado suuqa telefoonka baqdin tirada codsiyada ka mid ah waxay marin u heli karaan. Kaasi waa ay caanka ah ilaa xad ah in badan oo inaga mid ah ayaa la soo casriga ah, kuwaas oo sida Mararka qaarkood aad rabto in ay sii haystaan ​​kuwa fariimaha SMS heel in aad telefoon iyo aad u badan tahay in la yaabeen ah habka ugu wanaagsan ee iyaga dib up. Mid ka mid ah codsiga PC weyn oo sida xaqiiqada ah samayn doonaa sixir aad u waa Wondershare Mobiletrans .
Mobiletrans Wondershare waa qalab kala Timid Hanuun badan oo kala duwan ka mid ah qaababka la quruxda isagoo sheegay in codsigan ayaa ka shaqeynayaan ah scalable habboon users ka soo diyaariyeen balaadhan oo ah dhufto ee telefoonka gacanta.
Ma aha oo kaliya ma ogola iibsiga ee SMS ka mid ah macruufka iyo telefoonada android, laakiin waxa ay sidoo kale taageertaa Symbian iyo telefoonada blackberry.
Software ayaa lagu rakibi karo ee kombiyuutarada Mac iyo daaqadaha aan halmaamay in waxa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan kala duwan oo ka kooban dhexeeya telefoonada ee shiidaa kasta oo OS iyo kombiyuutaro Personal sidoo.
Waxa ay u ogolaataa hayaan phone aamin
Waxa ay u ogolaataa wax kaqabashada of hayaan android iyo qalabka macruufka
Waa in qalab ay taageerayaan ku wareejin karaa content Lugood
Software waxaa loo isticmaali karaa si ay u masixi phone si nabad ah
Backing ilaa SMS
Hadda oo aad lahayd guud ee qaababka la Mobiletrans Wondershare , hadda waxaan qaadi peek ah ee sida aad dib kartaa SMS ka casriga ah android ama macruufka. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa download Mobiletrans Wondershare ka site-http rasmi ah: //www.wondershare.com/phone-transfer/.Make Hubi in aad doorato madal ay xaq u diirada ku xiran tahay nidaamka qalliinka ee aad kombuutarka. Ka dib markii ay soo degsado software-ka, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo isku mid oo waxaa lagu daahfuri.
SMS kaabta in Phone kale
Sida ku cad qaybaha hore, software kuu ogolaanaya in aad dib ilaa farriimaha si aad u casriga ah iyo in ay PC aad ku rakiban software ah. Dabcan tani waxay ku xiran tahay aad u kala jeceshahay. Si aad dib ilaa xogta aad telefoonka kale smart, waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan labada telefoonada in kombiyuutarka la isticmaalayo dekadaha USB ah. Haddii la xidhiidha waa xaq, labada telefoonada smart waa muuqdaan interface software ah.
Waxa soo socda waxaad u baahan tahay inaad samayso waa fariimaha qoraalka la doortay ka soo liiska dhexe iyo guji Start Copy in aad nuqulka files si phone Ahaado. FG Xusuusnow in uncheck kuwa kale ka mid ah liiska marka laga reebo fariimaha qoraalka
SMS kaabta in Computer ah
Si aad dib ilaa fariimaha aad your computer waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan telefoonka fariimaha ka dibna dooro ikhtiyaarka gurmad in menu guriga. Your phone waa muuqdaan interface la liiska waxyaabaha in la koobiyeyn karaa dhexe. Hubi in ay doortaan on fariimaha qoraalka iyo guji Start Copy. FG Xusuusnow in uncheck kuwa kale ka mid ah liiska marka laga reebo fariimaha qoraalka
Soo celinta Your Messages xoojiyaa
Hadda oo aad ogtahay sida in ay dib u kor fariimaha, waxa ay sidoo kale waa mid aad u muhiim ah in aad ogaato sida ay iyaga inuu ka soo kabsado .Kadib oo dhan, waxaa jira wax aan ku iyaga taageero haddii aad ma doonayaan in ay iyaga soo ceshano mar ka mid ah mustaqbalka. Si aad u soo celin fariimaha aad, waxaad u baahan doontaa in aan bilowno codsiga iyo xirmaan telefoonka aad rabto inaad ku kaydiso ee fariimaha qoraalka ah kabsaday isticmaali USB ah ee xidhiidhka.
On interface guriga, dooro Soo Celinta doorasho. Hoos u soo menu siin doonaa qaab gurmad file fursadaha-xulo. La keeneen in doonaa in aad heshaan meesha aad ku kaydsan file gurmad ah. All inaad samayso waa ay helaan faylka, dooro file, hubi on fariimaha qoraalka iyo guji Start Copy in aad nuqulka farriimo ay u phone bartilmaameedka.
Waxa ugu weyn oo software tani waa in ay sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala si ay u soo ceshano hayaan sameeyo software kale oo waaweyn iyo dhufto. Haddii aad sameeyey hayaan la iCloud, MobileGo iyo Lugood.
Tani waa uun aragti guud oo ku saabsan sida MobileTrans loo isticmaali karo in uu kaydiyo fariimaha laakiin arrin weyn waa in la software waxa aad farabadan oo gurmad ah alaabtii kale oo muhiim ah iyo sidoo kartaan. Waxaad isticmaali kartaa si ay u gudbiyaan Music, videos, barnaamijyadooda, xiriirada, jadwalka taariikhda, sawiro iyo Guda yeedha. On top of in, waxaad isticmaali kartaa software ah in la isticmaalo software-ka si ay u gudbiyaan content kaydiyaa Lugood. Ugu dambeyntii, waxaad u isticmaali kartaa si hayaan wareejiyo ka iCloud kaliya haddii aad leedahay iPhone ama qalab kasta oo macruufka.
Marka la eego fudud, Mobiletrans Wondershare waa qalab tayo leh oo keena in xogta telefoonka kala iibsiga baqdin qaababka ay boosaska badan. Sidaas, ay wakhti aad ku dilay shimbiraha la kaliya tuuro hal kuwa ay qaadan codsigan. La hadal ee u qalma lacagta oo aad u malaynayso waxa Mobiletrans Wondershare bixin doonaa marka la barbardhigo qiimaha qaadan version buuxda oo la mid ah.
> Resource > macruufka Data Recovery > Sida loo gurmad SMS labada Android iyo macruufka.